IYunivesithi yase-Columbia: Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo ye-Acceptance, Eninzi
Izikolo ze-SAT, Imali yokwamkeleka, iNcediso yezezeMali, ukuFundela, iRhafu yokuHlola, kunye nokuNinzi
IYunivesithi yaseColumbia, njengezo zonke ii- Ivy League Schools , i-admissions ekhethiweyo, kwaye ngo-2016, izinga lokumkela lalingama-7% kuphela. Kungakhathaliseki ukuba unamandla kangakanani amanqaku akho kunye ne-SAT / ACT izikolo, kufuneka ucinge nge-Columbia isikolo esikolweni . Abaninzi abafake izicelo ezifanelekileyo abaya kufumana. Qinisekisa ukuba uye kwiintsifo zakho, iincwadi zokucebisa, kunye nemisebenzi yecandelo elithile - konke kudlala indima kwi-equation equation.
Idatha yo kwamkelwa (2016)
I-University University Acceptance Rate: 7%
Columbia GPA, SAT kunye ne-ACT Score Graph
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 700/790
IYunivesithi yaseK Columbia Inkcazelo
Ukuba ufuna i-Ivy League kwimfundo yasezidolophini, qiniseka ukuba ujonge eK Columbia. Indawo yayo kuManhattan ephezulu ibeka kwindawo efanelekileyo kwiSixeko saseNew York. I-Columbia ineeprogram eziphambili zezifundo-zabafundi abangama-27 000, ngaphezu kweyesibini kubathathu abafundi abaphumelele. Njengazo zonke izikolo ze-Ivy League, izinga eliphezulu le-Columbia lophando kunye nemfundo liye lafumana ubulungu kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi, kwaye amandla akhe obugcisa bobugcisa kunye nezesayensi ayifumana isahluko seP Phi Beta Kappa Honor Society.
Izifundo zaseyunivesithi zixhaswa ngumyinge obalaseleyo we-6 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule be-faculty .
Ubhaliso lwabonke: 29,372 (8,124 izifundo ezidlulileyo)
Ukuphazamiseka kwesini: 54% Amadoda / 46% Abafazi
Imfundo kunye neMali: $ 55,056
Igumbi neBhodi: $ 13,244
Ezinye iindleko: $ 2,085
Iindleko ezipheleleyo: $ 71,785
Uncedo lwezeMali wase-Columbia (2015 - 16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 57%
Izibonelelo: $ 46,127
Imali: $ 8,978
I-Popular Majors: I- Biology, i-Biomedical Engineering, i-Biomedical Science, Ubunjineli boLuntu, i-Economics, isiNgesi, iMbali, i-Neuroscience, i-Nursing, i-Operation Research, i-Political Science, i-Psychology
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka engama-4: 84%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 94%
Imidlalo Yezemidlalo: Ibhola, Ibhola, I-Tennis, Ukubhukuda nokuDaza, Umkhondo kunye nensima, Ukulwa, Ukukhawula, Iqonga, Iqonga, iBhola yebhola, iGalofu, iSekashi, iLizwe eliphambeneyo
Ezemidlalo zaBasetyhini: IHockey yeHlabathi, iVolleyball, iTennis, iLizwe eliPhambukayo, iLacrosse, Ukukhawula, Ukuhlaselwa kwebhola, iChola, UkuBhukuda nokuDoba, Umkhondo kunye nensimu, iBhola lebhola, iBhola
Columbia kunye nesicelo esiqhelekileyo
IYunivesithi yaseColumbia isebenzisa isicelo esiqhelekileyo .
I-Admissions yeYunivesiti yase-Emporia
I-Crown College Admissions
I-Tennessee State Admissions
Amagama aseJamani wezilwanyana zezilwanyana - iHaustiernamen
I-University of Chico
Qondani ukuchithwa kweeFiberglass
Ukufunda i-Quiz kwi-'Ekuninzi kwiLake 'nge-EB White
Ziyiphi iifofa ezizuzwayo?
Imfazwe YaseMerika: Uwonke jikelele uFilipu H. Sheridan
Uthando lukaYobhi kunye nokungathandeki Ukuphulaphulwa kweeNgqiqo
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Bavarder" (ukuxoxa)